Iyiphi indima e thermoregulation isikhumba: ngemiphumela izici of inqubo
Isikhumba isitho esingavamile esingaphakathi zomzimba womuntu. It wayengadlali okhonza njengesosha isithiyo yemvelo kanye isixhumanisi phakathi kwayo ngesikhathi esifanayo zonke izici zendawo ezungezile. Kulesi sihloko sizohlola lokho indima isikhumba e thermoregulation. Futhi lokho izici ezifanayo kwesakhiwo, kufanele ube ukuba enze lo msebenzi?
isikhumba Human: izici kwesakhiwo
Yebo, isikhumba - kuba umzimba ngempela. Ngaphezu kwalokho, ngobukhulu emzimbeni womuntu. Isisindo sayo omdala kuyinto ezintathu kg, futhi endaweni kungaba square metres emibili. Kodwa ukushuba encane isikhumba - 5 mm. Futhi ezingxenyeni ezahlukene lesi silinganiso zingahluka. It kuncike umthwalo. Lapho mkhulu, isikhumba mkhulu futhi ezimaholoholo. Ngokwesibonelo, ku-amathe ezinyawo. Futhi lapho kukhona ngomshikisho omncane - ohlabayo. Isikhumba futhi kuthathwa nemikhiqizo yalo. Kubantu, kuba izinwele nezinzipho.
Skin wenza imisebenzi ebalulekile. Ziyakwazi zokuzivikela, zokuphefumula, excretory, umzimba kanye zokwenziwa. Kodwa ukuze siqonde lokho indima isikhumba thermoregulation, kubalulekile ukuba sicabangele izici eziyinhloko isakhiwo umzimba.
Olwelwesini isikhumba ubizwa ngokuthi epidermis. It is ngokugcwele kwakhiwa flat izicubu EPITHELIAL. Lesi sendlalelo siqukethe izingxenye ezimbili. Eyokuqala ibizwa ngokuthi uphondo. Kuyinto eziningi amangqamuzana afile ukuthi sloughed off usuku ngalunye. Kodwa isikhumba kuba ohlabayo ngesikhathi esifanayo akubi. Futhi kwenzeka ngoba uphondo itholakala ngaphansi ungqimba epidermis yesibili - ihlumela. Lena bukhoma, amaseli njalo sokuhlukanisa ezinikeza lechubekako zesikhumba ukuvuselelwa.
Ngezansi epidermis kuyinto dermis, noma isikhumba uqobo. Lokhu ezicutshini kuyinto obukhulu, ukwakha ngesisekelo wonke isikhumba. It yakhiwa collagen ethandele. Siyabonga kulesi sici, isikhumba enwebekayo akusho aphambane ngaphansi kunoma iziphi izinhlangano ezixuba. Kukhona futhi ezenza umuntu azibonayo touch, ubuhlungu kanye lokushisa ushintsho, igazi lymph izitsha, izinwele izikhwama, umjuluko nezindlala sebaceous.
izicubu Ongama adipose
Ejulile isikhumba ungqimba futhi siqukethe izicubu adipose phakathi imishayo lapho amangqamuzana ngamanye zitholakala. Nge olwenzeka abalulekile umsoco ukushuba umzimba lesi sendlalelo zingandiswa ukuba amasentimitha eziningana. Thermoregulation izinqubo, nokuvikelwa uma umonakalo mechanical, ukuhlinzekwa ngokudla ngesikhathi nezihibe - la izici eziyinhloko fat ongama.
Uyini thermoregulation umzimba
Man iyisilwane esinegazi elifudumele. Lokhu kusho ukuthi izinga lokushisa komzimba wakhe umi njalo futhi esizimele izinguquko ezimweni zemvelo. 36,6 degrees - imithetho izinga eyaziwa ngisho nezingane. Izici thermoregulation womuntu futhi njalo kule inkomba kanye ukushisa ashisayo, futhi ukubanda okwedlulele. Kungenzeka kanjani lokhu? Umzimba njalo ukudla izinto eziphilayo ayingxenye ekudleni. ngobugebengu Basuke phansi, futhi umphumela uba energy ezishisayo. Inqubo ibuyisela imvelo yayo senzeka ngokuvumelana imithetho yemvelo. Amazinga air ngokuvamile leliphasi kunaleyo umzimba. Ngakho-ke, lapho kufika ukushisa livela endaweni ne izinga eliphakeme kolunye uhlangothi. okungukuthi ukushisa kunikeza umzimba. Ngenxa yalokho, abantu kanye izinga lokushisa alushintshi. Iyini indima isikhumba thermoregulation? Kuyinto lokhu umzimba inquma ukushuba inqubo. Uma izinga lokushisa kwe-isikhumba acasuke bese eqala thermoreceptors reflex ukuphendula ukushisa ukulondolozwa. Nansi indlela: imithambo yegazi elise dermis, kuthiwa ayisesemikhulu, kancane igazi notshwala futhi ukushisa ukudluliselwa izinga liyancipha.
Emazingeni ephakeme, ngesikhathi umsebenzi thermoregulation indlela wenziwa ngendlela ehlukile. Kulokhu, umzimba udinga ukukhokha ethile ukushisa ukugwema okweqile yayo. Ezimweni ezinjalo, la mangqamuzana ezinzwa inkanuko olunye uhlobo. Zibona ukushisa, okuholela ezinzwa ngiyibona kwenzeka kanye elihambisana reflex ukuphendula. Ihlala eqinisweni lokuthi izitsha uvuleke isikhumba, isikhumba uthola semali igazi ukudluliswa ukushisa izinga iyakhula. Ngakho, umzimba womuntu awuwona njalo ezimbili izinqubo okuphambene okwenzeka. Eyokuqala yalezi ibizwa ngokuthi isizukulwane ukushisa. Kuyinto ngenxa cleavage izidakamizwa macromolecular organic. Okwesibili - ukushisa. It lucwaningo isikhumba umgudu wokuphefumula. Umehluko phakathi kwalezi izinqubo ezimbili libizwa thermoregulation.
Kuyini ukubaluleka thermoregulation
Inani ukusebenza thermoregulation umzimba babenesibindi esikhulu. Cabanga ukuthi izinga lokushisa lomzimba wethu incike imvelo. Khona-ke, e-yokushisa okukhulu umzimba bekuzokuba abulawe ngoba namaprotheni itjhuguluko engekhe yalungiseka wabhubhisa ezingeni lokushisa + 42 degrees. Ngaphansi kwalezi zimo, inqubo ukubhujiswa kwabo - ukwephulwa ubuqotho iketango amino acid. Uma kungenjalo igazi kwakuyoba nje simisiwe ezitsheni ngoba yayo imfuyo intercellular - plasma, 99% lamanzi. Kodwa lokhu akwenzeki ngokusebenzisa umsebenzi isikhumba esihlelwe nesimiso sezinzwa. Kodwa hhayi lokushisa kuphela kuthinta thermoregulation. Ngokuqinisekile, wonke injabulo ukuhlolwa ajulukayo izintende zezandla. Kungani lokhu kwakwenzeka? Into wukuthi yokwesaba endocrine nezindlala hormone lwalo emfudlaneni igazi, okuholela ekukhulelweni vasodilation futhi, ngenxa yalokho, ukwandisa ukudluliswa ukushisa.
Sesihlole iyini indima isikhumba ezimweni thermoregulation umzimba. Lokhu umzimba kubhalansisa irisidi bese ukushisa okukhipha, ekuqinisekiseni ukuqinisela lokushisa komzimba a eziphilayo esinegazi elifudumele.
Ukuzinikezela abafundi basesikoleni esiphakeme: the simo umcimbi
Ukubaluleka umsuka imikhaya novikov
Iyini indima yamanzi amangqamuzana omuntu
Amaqiniso simbe futhi ethakazelisayo Umhlaba
Circle - Iyini? Umbuthano efana ifomu ezengeziwe abafundi imfundo
GEF - kuyini? Izidingo Sikhungo Standard
Pasta nge inyama, iresiphi elula
Uma ngobugebengu esibukweni yini okufanele uyenze?
Julie ngu: Izibuyekezo izincwadi, izinkulumo kanye nezinkulumo
Jump ngezintambo kwesisindo enhle!
Volkswagen iqembu yezimoto
Yini igcwele ako ochungechungeni "Flora ngu Gucci"?
Ukuhumusha kanjani incazelo yokulala ezinsukwini zesonto?
Lynx: Isilwane ukuthi ufanelwe ukuqashelwa
Udweba kanjani gouache isikhala? Iseluleko kubaculi abasha